सर्बसाधारणको पहुँचमा NRNA लाई पुर्याऊन पहल |
Home समाचार सर्बसाधारणको पहुँचमा NRNA लाई पुर्याऊन पहल
सर्बसाधारणको पहुँचमा NRNA लाई पुर्याऊन पहल
गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको जुलाई ३१ तारिखमा हुने निर्वाचनको लागि वेष्टमिडल्याण्डवासी धतानन्द (डिएन) खरालले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
सन् २००७ मा बेलायतभित्रका खराल सफल युवा व्यवसायी हुन् । गुल्मी जिल्लामा जन्मिएका खरालसँग बेलायतमा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गरेको अनुभव छ । सामाजिक सेवामा सक्रिय खरालसँग हाम्रा संवाददाताले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता :
अहिले बेलायतमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
बेलायत आएदेखि लामो समय रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा संलग्न थिएँ । अहिले ड्राइभिङ्ग स्कुल सञ्चालन गरेको छु । व्यवसायप्रति खुशी छु । फुर्सदको बेला समाजिक क्षेत्रमा समय दिने गरेको छु ।
गैरआवासीय नेपाली संघमा कसरी जोडिनु भयो ?
मैले ग्लास्गोमा व्यवसाय सञ्चालन गर्थे । सन् २०१५ को संघको निर्वाचनमा साथीहरुले संघको सदस्यता दिनु पर्छ भन्नुभयो त्यही देखि औपचारिक रुपमा प्रवेश गरे । नेपाली समाजमा सक्रिय भएको व्यक्ति भएकोले संघका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालेको छु । केही संस्थागत मुद्दामा मेरो सुरुदेखि नै बिमति थियो ।
कुन कुन मुद्दामा तपाईको बिमति हो ?
विदेशमा २ वर्ष बसेको नेपाली स्वतः गैरआवासीय नेपाली भन्ने सरकारी परिभाषा छन् तर यहाँ हरेक निर्वाचनमा पैसा लिएर सदस्यता बनाउने प्रचलन छ । उम्मेदवारी शुल्क निकै महँगो छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणको पहुँच यो संस्थामा हुन सक्दैनन् भन्ने मेरो मान्यता हो त्यसैले कसरी हुन्छ यो संस्थालाई धनाढ्यहरुको क्लवबाट सर्वसाधारणमा ल्याउनुपर्छ ।
निःशुल्क उम्मेदवारी र सदस्यता वितरण गर्दा संस्थामा आर्थिक असर पुग्दैन र ?
सदस्यता र उम्मेदवारीबाट संकलन भएको रकम चुनावमा खर्च हुन्छ त्यसलाई बचाउन सकिन्छ । अब अनलाईन मार्फत चुनाव हुँदा धेरै खर्च लाग्दैन । संस्थाको आर्थिक स्थायित्वका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ । मैले चुनाव जिते भने यिनै मुद्दामा केन्द्रित रहन्छु ।
तपाईले चुनाव जिते पछि के गर्नु हुन्छ ?
मैले संघको सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । संस्थाको विधानले सचिवले के गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट पारेको छ । विधानको अधिनमा रहेर केही गर्ने उद्देश्यले ७ बुँदे प्रतिबद्धता अघि सारेको छु ।
के के छन् तपाईका प्रतिबद्धता ?
संघका नियमित मुद्दा लगायत, यो अभियानमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता, स–साना लगानी, सदस्यता र उम्मेदवार निःशुल्क गर्ने, संस्थाको वैज्ञानिक अभिलेख राख्ने लगायतका प्रतिबद्धता अघि सोकेको छु ।
तपाईले चुनाव जित्ने आधारहरु के–के हुन् ?
मुलतः म मिडल्याण्ड क्षेत्रमा बस्छु । यो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मतदाताहरु छन् । उहाँहरुको पहिलो रोजाई म नै हुनेछु भन्ने विश्वास छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवार रोजीना प्रधान राईले अघि सार्नु भएको प्रतिबद्धतामा मेरो पूर्ण रुपमा सर्मथन रहेको छ । उहाँ संस्थाको लोकप्रिय उपाध्यक्ष समेत हो ।
उहाँको पूर्ण रुपमा मलाई साथ छ । त्यसका अतिरिक्त मेरा प्रतिबद्धताप्रति बेलायतबासी नेपालीहरुले साथ दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।